Semalt War Warns Of 8 SEO Techniques Mainty
Ny teknikan'ny SEO dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika napetrak'ireo motera . Na izany aza, misy ireo olona (spammers) izay te hanapaka ny zorony mba hitondra fitaterana organika any amin'ny toerana misy azy ireo. Manao izany izy ireo amin'ny fandikana ny fitsipika napetrak'ireo milina fikarohana amin'ny fombafomba fantatra matetika hoe kapa mainty.
Michael Brown, mpiasa matihanina avy amin'ny Semalt , mamaritra ny sasantsasany amin'izy ireo ho anao mba hijanonana ho azo antoka:
Mividy rohy mifototra amin'ny fampahalalana tahaka ny fandehanany, ary ny fifamoivoizana azon'ireo mpampiasa azy, mba hahazoana loka avo be. Mora amin'ny fanatanterahana izany satria tsy voatery hiatrika ny kalitaon'ny rohy ny olona iray rehefa vita ny fifampiraharahana. Ankoatra izay, satria ny raki-pikarohana toy ny Google dia miankina amin'ny lahatsoratry ny lahatsoratra amin'ny endri-tsoratra mba hizaràna toerana, dia afaka misafidy ny hividy ny iray amin'ny alàlan'ny safidiny.
2. Fanamarihana Spam
Ny tanjon'izy ireo dia ny mamorona adin-tany malalaka amin'ny tranokalan'ny spammer ary tsy manolotra tombontsoa SEO. Ny bilaogy misokatra tsy misy fanaraha-maso kalitao dia lasibatra mora ho an'ny tsikera spammy. Mamela ny fahatsapany ratsy amin'ny olona mitsidika ilay vohikala izany, izay mampihena ny traikefany. Tsy afaka mametraka fanehoan-kevitra sarobidy izy ireo hatramin'ny nisian'ny bilaogy ho tsy raharaham-pahaizana na tsy raharahiana.
3. Votoaty dika mitovy
Teknika "copy and paste" dia nampiasaina mba hanaparitaka votoaty mitovy amin'ny sehatra maromaro. Ny fitaovam-pitadiavana dia misafidy ny votoaty miavaka sy ny duplication dia mampalahelo fotsiny ny vintak'ilay tranokalam-pifandraisana ambony. Ny mpampiasa dia tsy manantena ny hitady votoaty mitovy amin'ny rohy maromaro ao amin'ny lisitry Google..Mampihena ny traikefany izy ireo ka izany no mahatonga azy ho fotsy mainty. Ny duplication dia mety hitranga ihany koa amin'ny sehatra tokana. Amin'ny ankapobeny dia matetika noho ny tsy fisian'ny fahalalana izany. Ireo labozika kanônika dia mamaritra ny dikan-tsoratry ny lahatsoratra iray, ka mamoaka dika mitovy hafa amin'ny takelaka Google crawl.
endrika endri-pitenenana izay ahafahan'ny mpivarotra hanova ny antontan-taratasy ho toy ny hoe vaovao na tsy manam-paharoa amin'ny fampiasana fitaovam-pitaovana plagiarism. Mahazo laza izy io, na dia eo aza ny fiorenan'ny votoatin'ny tranonkala.
Ny fanakambana dia tetika ampiasaina hamoahana votoatiny na adiresy URL amin'ny mpampiasa izay tsy mitovy amin'ny endriky ny milina fikarohana. Manana ny motera fikarohana izy io mba hametrahana azy ambony amin'ny SERP sady manome vaovao tsy misy ifandraisany amin'ilay mpitsidika.
Ireto avy ireo pejy fanentanana tarigetra (4) izay mamindra ny mpampiasa amin'ny vokatra voafidy any amin'ny toerana hafa miaraka amin'ny fampahalalana tsy misy ifandraisany. Mifantoka amin'ny fisainana avo lenta amin'ny fangatahana manokana izy ireo.
7. Teny fanalahidy
Eto, ireo tompon'ny tranonkala dia hameno ny votoatiny amin'ny ankamaroan'ny teny fanalahidy avo lenta mba hampitombo ny fahafaha-mionony amin'ny fisehoana amin'ny SERP, ka noho izany dia mitondra fiara be loatra araka izay tratra. Na dia izany aza, ny teny fanalahidin'ny fàfana dia mamoaka lahatsoratra tsy manara-penitra fa tsy mpitsikera.
8. Soratra tsy hita
Ny fomba dia ny fametrahana teny fanalahidy iray amin'ny fotsy fotsy, ka mahatonga azy ireo tsy hahita ny mpitsidika. Ireo fitaovam-pitadiavana ihany no ahafahana mitady, mikitroka ary manindry azy ireo.
Ireo olona izay mampiasa ny fampiasana teknolojia mainty dia tsy miraharaha ny loza ateraky ny loza mitatao aminy hatramin'ny nahitan'izy ireo azy. Manjaka ny sazy, na amin'ny tranga ratsy indrindra, ny fandrindrana fikarohana dia manakana ny tranonkala tsy ho hita ao amin'ny SERP Source .